Garaagarummaa Bilisummaa Biyyaa fi Ummataa Yaada Ifsa ADO irratt kenname – Gubirmans Publishing
Posted on March 15, 2013 by bgutema
Erga Marshaal Tiitoon du’e Yugoslavia sabooti jalatt gumaawan dura taa’ummaa wal jijjiiranii gaggeessu turan. Garuu sun emapayerummaa Serbiyaa irratt jijjirama hin fidne. Kan garaagarummaa fidu abba tokkoota hogganan utuu hin ta’in jijjiirama caasaa waliigaltee ummatootaa qabu. Kanaaf gaaffiin walabummaa sabaa dhiiga dhangalaasise. Wayyaaneen kan hin demokraatofneef qabsaawoti Tigraayi jara kanaa gaditt demokratawoo ta’uu dhabuun utuu hin ta’in empayera irratt mataa ta’uu dha. Sunimmoo bu’aa saanii waan eeguuf diiguu hin feene. Empayerri diigamu malee demokratummaan akka hin jirre mirkaneessa. Nagaan diiguun yoo didame dhiiga lolaasuun hin hafu. Nambiyyumaa Itiyoophiyaa utuu hin walabummaa Oromiyaatu nagaa fi araara buusaa. Oromoo haaraan kun empayera maqaa jijjiirraan mirgii ummatootaa “ofkaasaan” (automatic) jijjiirama kan jedhan fakkaata. Demookratummaan koloneeffataa bulchaa fedha ummatootii walabummaaf qaban akka hin dhaabne, waan Catalina, Quebec, Scotland fi Wales itt jiran ilaaluun ni gaha.
*Yaadii kanaa olitt dhihaate akka miseensa ABO turoo tokkoott malee dhaabicha bakka bu’ee kan dhihate miti. Oromiyaa bilisi haa jiraattu!